🥇 Akaụntụ maka iwu na nnyefe
Ikwu oke: 4.9. Onu ogugu nke otu: 205
Vidiyo nke ndekọ ego maka iwu na nnyefe
Nye iwu ndekọ ego maka iwu na nnyefe
Emebere usoro ihe omume Universal Accounting System nke ọma maka azụmaahịa na-aga nke ọma nke lọjistik, ụgbọ njem, ndị na-ebu ozi na ọbụna ụlọ ọrụ azụmaahịa: sọftụwia ejiri nlezianya chepụta na-enye gị ohere ịmegharị usoro ọrụ, melite nhazi ọrụ, na-achịkwa mmezu nke iwu, soro usoro ọ bụla. nke nnyefe, nyochaa àgwà nke ọrụ ndị a na-enye ma nọgide na-enwe nkọwa zuru ezu nke usoro ọ bụla na-abata na nke emechara. Akụrụngwa anyị na-enye na-enye ngwá ọrụ dịgasị iche iche maka ịhazi usoro azụmahịa niile, site na idobe na imelite nchekwa data na ịmepụta atụmatụ ego maka ọdịnihu; ma isi ọrụ nke usoro a na-edozi bụ ndekọ nke iwu na nnyefe. Nbufe ngwongwo chọrọ usoro nlezianya nke nhazi na nsochi oge iji gbanwee ụzọ ngwa ngwa ma mee ihe niile dị mkpa iji mezuo iwu dịka ụbọchị akwadoro. Ya mere, usoro ndekọ ego na-enye aka mee ka mma nke ọrụ dị mma, mgbanwe dị elu nke arịrịọ ndị ahịa, mgbasawanye na mmepe nke azụmahịa na, n'ezie, nnata nke ego dị elu mgbe niile.
USU software dị iche na usoro ndị yiri ya na ịdị mfe na ọsọ nke ọrụ na ya, nhazi ihe na interface. A na-ekewa mmemme ndekọ ego n'ime ụzọ atọ bụ isi, nke ọ bụla n'ime ha na-arụ ọrụ nke ya ma na-ejikọta ya na ndị ọzọ. Ngalaba ntụaka bụ ọbá akwụkwọ data nke ndị ọrụ na-emelite ma na-agbakwunye ya mgbe niile. Ọ na-echekwa ozi gbasara ihe gbasara ego na akaụntụ ụlọ akụ, kọntaktị nke ndị ọrụ na ndị ahịa, data nke alaka ụlọ ọrụ, ụdị ọrụ na ụgwọ, nhazi ụgbọ elu na nkọwa ụzọ. Ngalaba modul bụ isi ma bụrụ ebe ọrụ maka ịdenye iwu ọhụrụ maka nnyefe na nlekota nlekota na-aga n'ihu. Usoro ọ bụla nwere ozi gbasara onye na-ezipụ na onye nnata, isiokwu nke nnyefe, akụkụ, ụgwọ, onye ọrụ nkwekọrịta, ngụkọta ego na ọnụ ahịa. N'otu oge ahụ, usoro ihe omume ahụ na-arụ ọrụ nke na-emeju onwe ya na mpempe akwụkwọ nnata na nnyefe, yana ibipụta akwụkwọ ọ bụla na-eso ya, nke na-eme ka ọrụ ahụ dị mfe ma mee ka ọ dịkwuo mma. Ọzọkwa, enwere ike ibubata ma bupụ ozi ọ bụla gbasara iwu site na sistemụ na ụdị faịlụ MS Excel na MS Word. Site na ịhazi mbupu n'ọdịnihu, ọ ga-adịrị ndị nhazi mfe ịchịkwa usoro nnyefe ibu. Ya mere, ngọngọ Modules bụ otu ọrụ zuru oke maka ngalaba niile. Ngalaba akụkọ na-enye ohere zuru oke maka ndekọ ego na njikwa ego site na ọrụ nke ịmepụta akụkọ dị iche iche maka oge ọ bụla. Ndị njikwa ụlọ ọrụ ahụ ga-enwe ike n'oge ọ bụla bulite ozi nyocha gbasara mgbanwe na nhazi nke ego, ọnụego uto uru na uru ụlọ ọrụ ahụ. Enwere ike ịhụ ozi gbasara ego ọ bụla n'ụdị eserese na eserese.
Usoro usoro ndekọ ego nke nnyefe dị mkpa maka ndị na-ebufe ozi iji soro ogo nke igbu egbu, rụọ usoro njem ọ bụla, lelee ezi uche nke ụgwọ niile a na-akwụ, na-achịkwa nnabata nke ihe ngosi ego n'ezie na ndị a haziri, wdg. Zụrụ Universal Accounting. Akụrụngwa sistemụ maka ịrụ ọrụ dị irè na nke ọma!
Ndozi zuru oke nke ndị ahịa na-egosi kọntaktị, nzukọ na ihe omume, na-eziga ọkwa banyere ego na ihe omume ndị ọzọ.
Na-ezigara ndị ahịa ọkwa onye ọ bụla gbasara ọkwa na mmezu nke iwu, yana ihe ncheta nke mkpa ịkwụ ụgwọ.
Ijikwa ụgwọ na ụkpụrụ, nnata ego n'oge sitere n'aka ndị ahịa, igbochi ọnọdụ ụkọ ego.
Nyocha nke ike ịzụta ndị ahịa site n'ịmepụta akụkọ na nkezi ụgwọ, yana iburu n'uche ọrụ ego nke ụbọchị ọrụ ọ bụla.
Usoro ahụ nwere ngwá ọrụ ịzụ ahịa maka ọrịre ahịa maka iji tụnyere ndị na-egosi ọnụ ọgụgụ nke nnyefe a na-enye, ndị ahịa ndị kpọtụrụ, na n'ezie dechara mbupu.
A na-akwụ ụgwọ nlebara anya pụrụ iche iburu n'uche ihe ngosi ego kachasị mkpa nke nkwụghachi azụ azụ ahịa, na-enyocha ike nke uru na ụkpụrụ ndị nwere ike ime, nyochaa uru na atụmanya mmepe.
Ọ dị mma iji duzie ọrụ njikọ nke ngalaba niile n'otu ikpo okwu na-arụ ọrụ na otu usoro ọrụ na nhazi nke usoro.
Iwu na-aga site na usoro nnabata eletrọnịkị, nke na-eme ka njem ahụ dị ngwa ngwa ngwa.
A na-eme ndekọ ego ịkwụ ụgwọ site na ịmegharị mgbakọ na mwepụ nke mpempe akwụkwọ na ụgwọ pasent, nke na-enyere aka iwepụ ikpe nke njehie.
Ohere zuru oke maka ịkọ amụma ego dị irè, na-eburu n'uche ọnụ ọgụgụ nke oge gara aga na nhazi atụmatụ azụmahịa.
Enwere ike ịgbanwe ụzọ nnyefe n'oge njem ma ọ dị mkpa.
Nyochaa arụmọrụ ndị mmadụ site n'itinye n'uche iji oge ọrụ na ọsọ nke ịrụzu ọrụ ndị e kenyere.
Sistemu na-enye gị ohere itinye mgbakwunye ọ bụla wee ziga ha site na email.
Nhazi dị iche iche nke mmemme ahụ ga-ekwe omume izute ihe niile a chọrọ na usoro n'ime ụlọ nke nzukọ ahụ n'ihi mgbanwe nke ntọala.
Ịkọba ego a na-enweta n'ihe gbasara ihe ndị na-akpata ego na-eme ka o kwe omume ịchọpụta ebe mmepe kachasị mma.